सभ्यता, संस्कृति र पर्यटन - Karobar National Economic Daily
सभ्यता, संस्कृति र पर्यटन
query_builderJune 7, 2017 10:01 AM supervisor_accountप्रा.डा. हरि शर्मा visibility428
मानव सभ्यताको इतिहास इसापूर्वदेखि नै प्रारम्भ भएको पाइन्छ । सिन्धु घाटीको सभ्यता, नील उपत्यकाको सभ्यता, मोहन्जेदारो र हरप्पाको सभ्यता, याङ टिसी क्याङ (चीन) को सभ्यता, ग्रिक–रोमन सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता वा यस्तै ठूल्ठूला नदी अथवा जलाशयहरूको तटीय भू–भागबाट सुरु भएको सभ्यता होस्— ती सबैको साझा पहिचान मानव जाति हिंस्रक प्राणीबाट एउटा संवेदनशील प्राणीका रूपमा विस्तारै परिवर्तित हँुदै सुधारात्मक आचार–व्यवहार र कृषिजन्य प्रविधियुक्त स्तरीय जीवन पद्धतितिर लम्कँदै गएको पाइन्छ ।
मानव जातिमा सौन्दर्यबोध र प्रकृतिप्रतिको गहिरो चासो वृद्धि हुँदै जानुका साथसाथै कालान्तरमा गीत–संगीत, कला, शिक्षा, आस्था, धर्म, ज्ञान र संस्कृतिप्रति उसको बढ्दो चाखले उसलाई विशिष्ट प्राणीका रूपमा परिणत गर्दै गएको इतिहास साक्षी छ । हत्या, हिंसा र पाशविकताको ठाउँ करुणा, अहिंसा र मानवताले ओगट्दै आएको हामी पाउँछौं ।
ऊ प्रकृति उपासक बन्दै जान्छ र मानव सभ्यताको एउटा सुदृढ आधार निर्माण हुन्छ । यसै निर्माणको फलस्वरूप तीर्थाटन र देशाटनको परम्परा एवम् सामुदायिक बसोबासका निम्ति उत्कृष्ट उर्वरा स्थलहरूको अन्वेषण बढ्दै जाँदा विश्वका विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूबीच एकीकृत जीवनशैली हुर्कंदै गएको हो । शिक्षासँगसँगै सञ्चार र यातायात व्यापक बन्दै गए र वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा फराकिलो ग्राम बन्न पुगेको छ ।
विभिन्न आस्था र विश्वासमा आधारित हाम्रा संस्कृतिहरूको अविर्भाव भयो र आज ती सबै संस्कृतिहरूको छाता संस्कृतिस्वरूप मानव संस्कृति लहलहाइरहेको छ । मानव संस्कृतिको यसै मनोरम छहारीमा पर्यटनले आफ्नो वैशिष्ट्यलाई कायम राख्न सफल भएको हो । सात समुद्र त के, ध्रुवीय प्रदेश पनि नाघेर मानिसहरू विश्व–दर्शनमा आए–गएको हामी देख्छौं ।
एसिया महादेशलगायत मध्यपूर्व, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, अमेरिका सबै हाम्रा लागि उपल्लो बास र तल्लो बास बन्न पुगेका छन् । स्पष्ट छ, एउटा नौलो पर्यटकीय क्रान्तिको उज्ज्यालो संसारभरि सर्वत्र पैmलिइसकेको छ । विकासशील र विवेकशील मानव सभ्यताले जन्माइसकेको छ अनुपम पर्यटन संस्कृति !
जीवन छोटो तर विविध उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारणले मानिसको व्यस्तता बढ्दो छ । विकास र सम्पन्नतातिर हाम्रा पाइलाहरूले जति–जति फड्को मार्दै जान्छन्, हामीमा त्यति–त्यति नै फुर्सदिलो समय निकालेर देशाटन गर्ने उत्कण्ठा बढ्दै जान्छ ।
प्रकृतिको मनोरमतामा स्वयंलाई उभ्याएर आफ्ना अन्य सम्पूर्ण उत्तरदायित्वहरू बिर्सिदिन मन लाग्छ । कहीं टाढाको मुलुकमा गई साहसिक विचरण गर्ने इच्छा प्रबल हुन्छ । मध्यपूर्वको मरुभूमि सफारी, अफ्रिकाका जंगल सफारीको अनुभव बटुल्न चाहन्छौं हामी ।
आईफल टावरको टुप्पामा रहेको रेस्टुराँमा जन्मदिन मनाउने वा रोमको क्याथोड्रलमा गई माइकालेन्जलोको कलाकृति नियाल्न भनौं वा मारलोको डाक्टर फास्ट्सले भैंm ट्रोयकी हेलेनलाई भेटेर उनीसँग मनोविनोदका केही क्षण गुजार्ने कसको इच्छा नहोला र ? पर्यटन स्वयं एउटा स्वच्छ, सुन्दर संस्कृतिका रूपमा हुर्कंदै पर्यटनप्रेमीहरूका लागि विशाल संस्कृतिका रूपमा उपहारस्वरुप प्रस्तुत भएको छ ।
भौतिक विकासको चरम शिखरमा पुग्दै गरेको आजको मानव सभ्यता पर्यटन संस्कृतिसँगसँगै फड्को मार्दै अग्रसर भइरहेछ । व्यस्त जीवनको चपेटामा पिल्सिएर ब्रह्माण्डमा लीन हुनुभन्दा पूर्व फुर्सदका केही क्षणलाई सँगालेर आफ्नो परिवार वा इष्ट–मित्रहरूसँग घुमफिरका लागि निस्कनु र एउटा नौलो परिवेशमा केही समय खर्चिनु आजको मान्छेको प्रबल चाहना बनेको छ ।
सन् २०१५ मा विश्वभरि झन्डै १ अर्ब १८ करोड ६० लाख मानिस पर्यटक बनेर विभिन्न देश–देशान्तरको भ्रमणमा गएको तथ्यांक छ । नेपाल भ्रमणमा सन् २०१६ मा ७ लाख २९ हजार ५ सय ५० पर्यटक आएका थिए । पर्यटनबाट मात्रै मुलुकले १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
कतिपय मुलुकमा सरकारले नै आफ्ना राष्ट्र सेवकहरूलाई पर्यटनमा जान प्रोत्साहन गर्ने गर्छ । नेपालका केही व्यावसायिक संस्थाले पनि यस पर्यटन संस्कृतिलाई आत्मसात् गरेको देख्न सुन्न पाइन्छ । पर्यटन संस्कृतिका दुवैवटा पाटा आन्तरिक एवम् बाह्य समान रूपले महŒवपूर्ण छन् ।
विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सन् १९५० मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या कुल २ करोड ५० लाख थियो र सन् २०१५ मा आएर यो संख्या बढेर १ अर्ब १८ करोड ६० लाख पुगेको थियो । यो बढ्ने क्रम जारी नै छ । दक्षिण एसियामा सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार १ करोड ८३ लाख पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । आगामी सन् २०३० मा यूएन डब्लूटीओका अनुसार दक्षिण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आजसम्मको सबैभन्दा बढी पर्यटक संख्या ५३ करोड ५० लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले भ्रमण गर्नेछन् भनिएको छ ।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको पर्यटनमा सन् २०१० को २२ प्रतिशत वृद्धि झन् बढेर सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत मा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने पर्यटनलाई मानव जातिले एउटा अपरिहार्य संस्कृतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ । मानव–मानवबीचको सुमधुर सम्बन्ध बढाउन, आत्मसन्तुष्टि हासिल गर्न, बहिज्र्ञान पाउन तथा आफ्नो सोचको क्षितिजलाई विस्तारित गर्न पर्यटन एउटा सशक्त माध्यम हो । हामीले परिकल्पना गरेको विश्व शान्तिलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्न पर्यटन संस्कृति नै सर्वोत्तम ठहरिने विषयमा दुईमत हुन नसक्ला ।
आज पर्यटन विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा सामान्य क्रियाकलाप मात्र नरहेर व्यापक संस्कृति बन्दै गइरहेको देख्दा भविष्यमा अद्वितीय प्राकृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा र जैविक विविधताको खानी हाम्रो नेपाल पनि अन्य विकसित पर्यटकीय गन्तव्यहरूको दाँजोमा अब्बल दर्जामा स्थापित हुन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
कदाचित नभनौं, पर्यटनले समाजमा विकृति निम्त्याइरहेको छ । यसले त बृहत् विश्वव्यापी पर्यटन संस्कृतिलाई बलियो बनाउँदै रोजगारी र आर्थिक गतिविधिका अवसरहरू सिर्जना गर्दै एउटा सुखद समावेशी समाजको निर्माण गर्न टेवा पु¥याइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि पर्यटन नै होइन र ? पर्यटनलाई मानव संस्कृतिका रूपमा हलक्क हुर्कन दिनुपर्छ ।
पर्यटन प्रकृति इतिहास